Xinhua Myanmar - ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံက ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသော နယ်စပ်ကို COVID-19 ကြောင့် နောက်ထပ်တစ်ပတ် ထပ်မံပိတ်ထား
ဘိုလီးဗီးယား ဘရာဇီး နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ လာပါဇ်မြို့ရှိ Hospital del Torax ဆေးရုံအတွင်း ဝင်ရောက်မည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သူနာပြုတစ်ဦးက ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) WORLD
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့်ထိစပ်နေသော နယ်စပ်အား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ ဧပြီ ၂ ရက်က ပထမဆုံးပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါတားမြစ်ချက်အား ဧပြီ ၉ ရက်တွင် ဖြေလျှော့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
“ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုကို ဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်မှာ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ နယ်စပ်ကို နောက်ထပ်တစ်ပတ် ထပ်မံပိတ်ထားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုနှင့် ပေါင်းစည်းရေး ဒုတိယဝန်ကြီး Benjamin Blanco က ပြောခဲ့သည်။
“ဒီကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ နယ်စပ်ဒေသတွေရဲ့ အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတွင် ခရီးသည်များအနေဖြင့် မကြာသေးမီက စစ်ဆေးထားသော COVID-19 ရောဂါမရှိကြောင်းရလဒ်များပြသရန် လိုအပ်ခြင်းအပါအဝင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တားဆီးရန် အထွေထွေဆောင်ရွက်ချက်များ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး COVID-19 ဖြစ်ပွားသူနှစ်ဦးကို တွေ့ရှိသည်မှာ တစ်နှစ်နှင့် တစ်လကြာမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဧပြီ ၈ ရက်အထိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူဦးရေ ၂၇၉,၂၀၇ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁၂,၄၁၂ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-04-10 05:38:03|Editor: huaxia
A year andamonth since the first two cases of COVID-19 were detected in Bolivia, the Ministry of Health reported 279,207 cases and 12,412 deaths from the disease as of Thursday. Enditem
A nurse checks the temperature ofawoman who enters the Hospital del Torax, in La Paz, Bolivia, on March 20, 2020. (Xinhua/Str)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အသစ်တစ်သုတ် ချီလီနိုင်ငံ လက်ခံရရှိ
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ပနားမားနိုင်ငံအတည်ပြု